Lona ngumyalezo wezizwe zonke walabo abafuna ulwazi neqiniso. Labo abafuna ukwazi ngenkolo yobu-Islam, ukwazi ngo-Allah (uMdali), ukwazi ngempilo nokuphumelela kowesilisa nowesifazane lapha emhlabeni nakwelizayo.
Okokuqala, eminye yemigomo yenkolo yobu-Islam ukuba, “Ukholwe ngukuthi uMdali munye kuphela” lokhu ukugcwalisa ngokusho isifungo esaziwa nge-Kalima esithi, “Akekho ofanele ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, uMuhammad uyisithunywa sika-Allah.”
Ama-Muslim akavunyelwe ukukhonza izithixo noma abantu ngaphandle kuka-Allah uSomandla uMdali wamaZulu noMhlaba, futhi akholwa wukuthi uMuhammad ungu-Mphrofethi ka-Allah wokugcina, aphinde akholelwe kubo bonke abaPhrofethi abanjengo Nowa, u-Jesu, u-Mose, u-Abraham, u-Davide njll.jll.
Akekho umuntu omkhulu kunabanye noma ongaphezu komunye kungaba umuntu wesilisa noma owesifazane ngaphandle kwalowo owenza izenzo ezinhle emehlweni ka-Allah.
Ama-Muslim akholelwa ekutheni u-Allah ungumdali wamaZulu noMhlaba nakho konke okuphakathi kwakho, futhi uMdali udale umuntu ngenhloso engukuthi agcwalise izethembiso zakhe nenkolo yakhe nokuthi kube nokuzwana nokwethembana phakathi komuntu noNkulunkulu.
I-Qur'aan iyincwadi equkethe imiyalelo kaMdali ukuze umuntu aphile impilo eNgcwele akwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi.